Haddii aad tahay macaamiil ku dayasho mudan Dukaanka Apple waxaad qaadan kartaa hadiyad kadis ah | Waxaan ka socdaa mac
Haddii aad tahay macaamiil ku dayasho mudan Dukaanka Apple, waxaad heli kartaa hadiyad lama filaan ah
Dukaamada Apple waa dukaamo qaas ah. Waxaan xasuustaa markii kuwii ugu horreeyay laga furay Spain, kuwaasoo ahaa dhacdo muhiim ah. Dukaammada halyeeyadu ay ahayd adeegsadaha iyo meesha wax soo saar kasta oo Apple ah la isku dayi karo lana taabto si hagar la’aan ah Hadda waxaan ognahay mid ka mid ah sirta sababta ay dukaamada shirkadda Californian ay khaas u yihiin. Qof shaqaale hore ah ayaa sheegay in haddii aad si edeb leh oo xushmad leh aad u dhaqanto, laga yaabo inaad sameyn karto inaad hadiyad hesho shaqaalaha dukaanka. Weligey dhadhamin, laakiin waxaa hubaal ah inay jiraan.
Shaqaalaha dukaanka Apple waxay leeyihiin hadiyado dhowr ah oo ay u isticmaali karaan "Yaab iyo farxad" macaamiisha. Taasi waa uguyaraan waxa yidhi shaqaale hore oo fiidiyowgiisa ku saabsan siyaasadda la sheegayo uu faafiyay.
Dadka, tusaale ahaan, waxay la yimaadeen telefoonno ay biyuhu waxyeeleeyeen. Xaaladdan, oo aan u oggolaanayn in la beddelo iyada oo aan la helin sicir caymis ikhtiyaari ah, ayaa u oggolaaday shaqaalaha dukaanka inay go'aan ka gaaraan, tusaale ahaan, haddii macaamilku u qalmo hadiyad lama filaan ah. Hadiyaddu waxay ka koobnayd inay bixin karto taleefan beddel ah oo aan qiimo lahayn.
Shaqaale kastaaba wuxuu leeyahay tiro cayiman oo hadiyado kadis ah. Layaab malahan, kuwani waxay aadaan macaamiisha si wanaagsan udhaqan ee ku dhexjira Apple Store. «Haddaad edebdarro ku tahay shaqaalaha ama dadka dukaanka ku jira, waa lagaa xallin doonaa dhibaatadaada, si kastaba ha ahaatee waad bixin doontaa.
Hada waa inaan tixgalino macluumaadkan sida xan, maxaa yeelay ma jirto xaqiijin rasmi ah mana lihin hubaal ah inaan ogaanno inuu ka shaqeeyey Apple Store iyo in kale. Laakiin waa run, in shaqaalaha xafiisyada dukaanku ay xoogaa faa'iidooyin ah u leeyihiin shaqaale ahaan. Ma garanayno haddii illaa heer aan awoodno inaan siino iPhone, laakiin ogaanshaha Apple maahan wax sidaas u waalan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Haddii aad tahay macaamiil ku dayasho mudan Dukaanka Apple, waxaad heli kartaa hadiyad lama filaan ah
Taasi waa run hal mar mackeyga 6-da bilood jira dhibaato ayaa heysatay, wey dayactireen laakiin markale waxyeello ayaa soo gaadhay isla isla wax laba jeer ah mana garanayeen waxa qaldan, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay mid cusub i siiyaan aniga cusub dheh maxaa yeelay waxaan ka furay Bakhaarka oo dammaanad qaadkii maalinta ee aan ku qaatay iyadoo waqtiga la dhaafaayo waa inaan badalaa batariga waxayna igu yiraahdeen hadaan sugo intay haystaan ​​way haysan karaan aniga lacag la'aan, way iska cadahay inay iyagu aniga waqtigaas igu ridi lahaayeen. wax badan oo run ah waligay daaweyn naxariis leh ayaan la qaatay oo waxaan la joogay wax soo saarka Apple muddo dheer.
Sida si fudud looga saxeexo dukumiinti ka socota Mac
Su'aalaha Degdega ah ee leh Tim Cook: "Ma noolaan karo la'aanteed kafeega iyo iphone-kayga"